VaGono Vodaidzwa Kuti Vape Paramende Humbowo neMuvhuro
Ndira 14, 2008
Komiti yeparamende inoona nezvemari, yasangana neMuvhuro muHarare ikasarudza mumiriri weZhombe muparamende, VaDaniel Mackenzie-Ncube, kuti vafanobata chigaro chasachigaro wekomi iyi, sezvo sachigaro wekomiti iyi, VaDavid Butau, vakabuda munyika mushure mekunge mapurisa abuda pachena kuti aivatsvaga.
Komiti iyi yabvumirana zvekare kuti gavhuna wedura remari yenyika, VaGideon Gono, vamiswe pamberi pekomiti iyi neMuvhuro svondo rinouya, kuitira kuti vape humbowo pamusoro penyaya yavo yekuti pane vanhu vavanoziva vari kuita zvehuori munyaya dzemari. Vanoziva nezviri kuitika mukomiti iyi, avo vasina kuda kudomwa nemazita avo, vaudzawo Studio 7 kuti VaGono vachabvunzurudzwawo zvekare nenyaya yehuori, uho hunonzi huri kuitika pa Reserve Bank.
VaGono vanonzi vachabvunzurudzwa zvekare kuti seyi bhanga ravo riri kutadza kupedza dambudziko remari, uye kuti vadome mazita evanhu vavakati vari kuchengeta mari nenzira isiri kwayo. Ntungamili Nkomo weStudio7 abata mumiriri weNkayi mudare reparamende, Va Abednico Bhebhe, nhengo yekomiti iyi, uye vanga vari mumusangano weMuvhuro, kuti tinzwe zvizhinji.